तिललाई पहाड बनाई मिलाएर लेख्न सक्ने त लेखकले मात्र हो क्यारे : युमेश पुलामी - MeroReport
तिललाई पहाड बनाई मिलाएर लेख्न सक्ने त लेखकले मात्र हो क्यारे : युमेश पुलामी
झापाका युमेश पुलामी ब्यबस्थापनका विधार्थी भए पनि सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कुनै समय उसु, फुटबल र भलिबलका खेलाडी युमेशलाई नयाँ ठाँउ घुम्न मनपर्छ । पुस्तक पढ्न पनि उत्तिकै रुचाउँने युमेश ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै युमेश पुलामीसँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
कुनै संगीत कन्सर्टको भिडमा उफ्रिएर जो पनि त रमाउन र हाँस्न सक्छ नि तर म शान्त र एकान्त ठाउँमा पनि एक्लै नाचेर उफ्रिन र मुस्कुराउन सक्ने मान्छे परे । अब चिन्ने नै हो भने केहि उपट्याङ्ग, बेसरम, यथार्थ परक सकारात्मक कुराहरु शेयर गर्ने सामान्य नेपाली नागरिक युमेश पुलामी भनेर चिनाउन चाहान्छु ।
मेरो सानै देखि जानी नजानी निबन्ध, लेख तथा कविताहरु डायरीमा लेख्ने बानी थियो । मैले इन्टरनेट र हट मेल प्रयोग गरे देखि नै मनमा एउटा खट्को रही रहेको थियो । आफ्ना कुराहरुलाई वेव पेजमा जस्तै निशुल्कमा कतै दुनिँया भरका मान्छेले पढ्न सक्ने गरी पछि सम्मको लागि राख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने तर त्यसबेला सम्म मलाई ब्लग बारे केहि पनि थाहा थिएन ! आफ्नो कुनै पनि कुराहरु लेखेर कुनै वेव पेजमा या पत्रिकामा दिदा एक त प्रकाशित हुन पनि गाह्रो थियो र यदि झुक्किएर प्रकाशित भैहाले पनि पुरै छाँटकाँट गरिएको हुन्थ्यो ! अनि त प्रकाशित भएकोमा खुसि भन्दा पनि बढी दु:ख लाग्थ्यो पुरै भाव नै बटारिएको देखेर । त्यसैले ब्लगको बारेमा थाहा पाएको सन् २००८ देखि नै मेरो लेखनको यात्रा डायरी देखि ब्लग लेखनसम्म आइपुगेको हो ।
ब्लगबारे कँहा सुन्नुभयो या कसैले तपाईलाई ब्लगबारे बतायो ?
मैले केहि लेख्ने गरेको र केहि साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुदैं हिडेको देखेर धनकुटाका मित्र टिकाजीले ब्लगस्पटबारे बताईदिनुभएको र ब्लगर मित्र कैलाश राईसँग परिचय गराई दिनु भएको थियो । त्यहीबेला मैले ब्लगको बारे थाहा पाएको हुँ ।
हुन त आफ्नो जिन्दगीको सबै भन्दा धेरै गुनासो गर्ने र तिललाई पहाड बनाई मिलाएर लेख्न सक्ने त लेखकले मात्र हो क्यारे । लेखक जस्तो आफ्नै जिन्दगीको मात्र गुनासो गरेर बस्ने मन नभए नि ब्लग लेख्न मन पर्यो र ब्लगर भए । मलाई ब्लग लेख्न मन पर्छ, अनि पढ्न पनि । अनि केहि कुराहरु अरुलाई पनि थाहा हुनु पर्छ भन्ने लगेर पनि ब्लग लेख्छु ।
लेख्नको लागि विषयवस्तु छान्दिन । कुनै पनि समय या ठाउँमा जे कुराले बढी मन बिझाउँछ, म त्यो कुरा ब्लगमा लगेर घोप्ट्याइ दिन्छु ।
तपाईले आफ्नै कुरा बाहेक अरु पनि चलाउनुहुन्छ ?
Kohabara.blogspot.com पनि चलाउँछु तर त्यसमा त्यति समय दिन सकिरहेको छैन ।
पाठकहरुले आफ्नो आदत र रहरलाई पनि संग्रह बनाएर राख्न सकिदो रहेछ, राम्रो कुरा भनेर मेरो कविता र मेरो लेखन शैलीलाई मन पराइदिनु भएको छ ।
मलाई रोलर स्केटिङ (Roller Skating) र पाैडि खेल्न औधी मन पर्छ साथै थोरै फोटोग्राफीको पनि भुत सवार छ !
कतिको भन्ने कुरै भएन नि पुरै छ, यो ब्लग लेखन मेरो नितान्त व्यक्तिगत रहर र रुचिकै उपज हो ।
त्यो त ब्लगिङ गर्नेहरुमा निर्भर रहन्छ तर ब्लगको शुरुवात भने नागरिक पत्रकारिता कै लागी भनेर गरिएको थियो ।
सोसल मिडियाको विकाश, परिवर्तन र प्रयोगलाइ सहि रुपमा सदुपयोग गरौ र धन्य ठानौ यसले बर्तमान परिपेक्षमा जति धेरै समयस्याहरु हामीलाइ दिएको छ त्यो भन्दा पनि धेरै अवसरहरु दिएको छ भनेर ! साथमा मेरो रिपोर्ट टिमलाई मुरीका मुरी, पाथीका पाथी धन्यबाद दिन चाहान्छु ।